Izinzuzo eziphezulu ze-15 Winstrol Okufuneka Uyazi ngaphambi kokuthenga i-Winstrol Online
/Blog/Ithala/Inzuzo ephezulu ye-15 Winstrol Okufuneka Uyiqonde Ngaphambi Ukuthenga i-Winstrol Online
ezaposwa ngomhla 01 / 17 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Yonke into malunga neWinstrol
1. Yintoni iWinstrol? 2. UWinstrol usebenza njani?
3. I-15 Winstrol Inzuzo kwi-Bodybuilding 4. Isisindo seWinstrol
5. Winstrol Half-ubomi 6. Isikhathi sokuThola iWinstrol
7. Winstrol Cycle 8. I-Winstrol Post Cycle Treatment
9. Kuthatha ixesha elingakanani ukujonga iWinstrol? 10. Iimpembelelo eziqhelekileyo zeWinstrol
11. Indlela yokuphepha i-Winstrol Side Effects 12. Ukunyaniseka kweWinstrol
13. Indlela yokuthenga i-Winstrol Online 14. Winstrol Powder Recipe
Ngaba i-anabolic steroids into eqinisekileyo xa ukhangele ukunciphisa ubunzima bomzimba wakho kunye kunye nokugcina ubukhulu bomzimba? Fumana ukuba uyayifumana ibhanki kwi-stanozolol (i-Winstrol) i-steroid, inzuzo enayo kwezinye i-steroids, kunye nendlela bathenge i-winstrol.
Ukuba ufuna ukutshisa amafutha kwaye unomzimba obunzima, ungabhalisela kwisimo sokuzivocavoca kwaye wenze ezinye izinto zokusebenza. Nangona kunjalo, oku kufuneke ukuqeqeshwa kunye nokuqeqesha rhoqo. Eyona ndlela kuphela yokuqinisekisa yehla emzimbeni ngokukhawuleza, unokunyamezela, kwaye ufumane okanye ugcine ubunzima bomzimba ngokuthatha isongezelelo se-steroid.
Ngokungafani nezinye i-steroids ezineempembelelo ezingaphezulu kweenzuzo, i-winstrol ineenzuzo ezininzi kumsebenzisi. Enye into enifanele ukwazi ukuba yinto ethile yokusebenzisa unyango.
1. Yintoni iWinstrol?
Ngaphambi kokufika kweli phepha, usenokuba ubuze imibuzo emininzi ephathelele, "Yintoni i-winstrol kwaye yenzani na?" Ewe, eli nqaku liza kutyhila ngaphezu kokuba ufuna ukwazi.
Winstrol okanye uStanzolol steroids zokwenziwa kunye ne-anabolic kunye neempahla ze-androgenic. Kwifom yayo eluhlaza, le nxalenye yekhemikhali yendalo ihamba neCAS no. 10418-03-8. I-Stanozolol ivela kwi-dihydrotestosterone (DHT). Inkqubo yokwakha iquka ukucima i-3-keto-aldehyde ye-oxymetholone ne-hydrazine.
UWinstrol ufumaneka nje ngomlomo okanye kwisiyobisi esichengeni. Isebenza ngokuqalisa ukuveliswa kweprotheni nokukhawuleza ukukhula kwemisipha. Ngaphandle koko, uninzi lwabantu luyifake ngexesha lomjikelezo wokusika ukuze kuphumelele umzimba omzimba kodwa umzimba. Isicatshulwa singavumelekile kumazwe amaninzi kuquka i-USA FDA ikhathaze njengento yeklasi ye-III.
Nangona zibonisa iimpahla ze-anabolic, i-winstrol nayo ibonisa ezinye iindlela zokwelapha. Ngokomzekelo, iyakwazi ukuphatha izifo eziphazamisa izifo, ukuvuselela imveliso ye-hemoglobin, kunye nokunyangwa kwe-angioedema. Nangona i-stanozolol itholakala kuphela phantsi kwonyango logqirha loqobo, usenokufumana Winstrol ukuthengiswa kwiindawo ezininzi zokuthengisa.
Esi sidakamizwa si-anabolic kathathu xa kuthelekiswa ne testosterone. Ukuba yi-C17-alpha alkylated steroid, i-stanazolol inesakhiwo esakhekileyo esivela ekutshintsheni kwe-hormone ye-dihydrotestosterone. Ngenxa yesi sizathu, i-10x anabolic kune-androgenic.
Isilinganiselo se-Anabolic 320 100
Androgenic 30 100
UWeststrol waqala ukuba khona kwi-1959. I-Winthrop Labs yenze iinjongo zokuphatha iimeko eziphazamisayo neziphazamisayo. Amandla okugcinwa kwe-nitrojeni kwesi siza kwenza ukuba kube ngumyalelo ochanekileyo wokuxhatshazwa kwemisipha. Ngo-1962, sele sele iphumelele ukuvunywa kwe-Food and Drug Administration (FDA).
Yintoni eyenza uWinstrol udume ngongqinano wokutshatyalaliswa kwezinto ezenziwa yi-1980s iOlimpiki. Ndiza kucacisa. Kwimidlalo ye-1988, uBen Johnson uzuze iindondo zegolide xa efika kwi-100M. Wabeka irekhodi elitsha ngokubetha i-American Olympian evelele, uCarl Lewis.
Nangona wayeyi-sprinter ye-world sprinter, uJohsonson wayenqabile ngenxa yokusebenzisa iStanozolol ukuphucula ukusebenza kwakhe. Ngenxa yoko, oogunyaziwe bahlubule umdaka wakhe waza kamva bammisa kwiiOlimpiki.
Emva kokuba le-anabolic steroid ibonakale isebenza kakuhle, abaninzi abagijimi bahamba ngokulandela i-doping for sports. Nangona kunjalo, urhulumente waseUnited States wehla nzima ekusebenziseni i-steroids. Ngenxa yoko, iqiniswe kwimithetho elawula imveliso, ukusetyenziswa kunye nokuthengiswa kwezi zibonelelo.
Qaphela ukuba ifom ekhusiweyo yile chiza yikhemikhali yecristalline engamhlophe. Uninzi lwabantu luyifumana winstrol powder ukunambitha ukuba namandla.
2. UWinstrol usebenza njani?
UWinstrol uyi-steroid ye-heterocyclic enobudlelwane obunamandla obubophelelayo be-androgen receptors. Ngeke nje idibanise iiprotheni kodwa iphinde ikhulise ukubunjwa kwe-collagen. Isilwanyana siphuthuma i-anabolism yamaprotheni ngelixa ke ngoko iguqula imisebenzi yezintlu.
Ihlisa amanqanaba e-Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), ngoko ke, eyenza ukwanda kwe testosterone yamahhala. Emva koko, umzimba wakho uthatha impahla ye-anabolic.
Iimpembelelo eziqhelekileyo ze-anabolic steroid ziimpawu ze-estrogenic. Nangona kunjalo, i-winstrol ayisoze yahlaziya i-estrogen. Isizathu sokuba ukuba i-A-ring efaka indawo yeqela le-3-keto, ukunikezela kwesi sidakamizwa steroid eyomileyo.
Ubukho beqela le-methyl kwisakhiwo salo landisa ukuhlaselwa kwe-stanozolol emzimbeni. Iziphumo ze-winstrol ziya kubonakala kwangethuba leentsuku ze-14.
3. I-15 Winstrol Inzuzo kwi-Bodybuilding
Ukuba ufuna ukuzuza ngokufanelekileyo kwi-winstrol, kufuneka udibanise kunye umsebenzi oqhubekayo urhulumente kunye nokutya okunempilo. Kwimizimba yethu inokuhluka ngohlobo lwezonyango kunye nokuphendula, ukulandela umyalelo kunye nokugcina umjikelo omfutshane kukukusindisa kwimiphumo emibi.
Winstrol inzuzo 1: Iingozi Zero ze-Estrogen Aromatization
Yintoni eyenza uWinstrol avele phakathi kwazo zonke ezinye i-anabolic steroids yinto yokuba ayitshintshi kwi-estrogen. Kubasebenzisi besilisa, oku kuyona nto ibaluleke kakhulu ongayifumana kwisicatshulwa esikhuthazayo.
Makhe ndicacise. Xa sele ngaphakathi emzimbeni, i-steroids idla ukuguqula kwi-estrogen. Iziphumo zecala ye-estrogenic aziyi kuba mnandi ngakumbi xa kufuneka uhambe kunye nezifuba zesetyhini, apho nayiphi na intlalo yoluntu izakuziqhenya ukuba.
Ukuba kukho nantoni na eyokushiya kwimeko engxowankulu malunga neengozi zokuncitshiswa kwamanzi, ke i-winstrol vs anavar i-history history. Ezi zimbini ze-steroids azibonisi umbane we-estrogen okanye ukugcinwa kwamanzi.
Winstrol inzuzo 2: I-Muscle Gain
UWinstrol udlala indima ekukhuliseni i-anabolism yeprotheni. Yenza ukuba iislims muscle zivelise kwaye zigcine iiprotheni ezininzi njengoko zinako, ngoko ke, ukwandisa zombini ubukhulu bomzimba kunye namandla. Ngenxa yokwanda kwenkqubo, umzimba uvelisa ngakumbi i-adenotriphosphate, ethatha inxaxheba enkulu ekwakheni imisipha.
Tote up stanozolol kunye ne-Deca steroid kunye nezinye izinto zokusebenza, kwaye uya kuba ne-winstrol yakho ngaphambi nangemva koko iziphumo zihamba nge-viral.
Winstrol inzuzo 3: Amandla Nokunyamezela
Naliphina umakhi womzimba oza kuqinisekisa kwaye aqinisekise ukuba i-steroid, eyandisa kuphela ubunzima besisu ngaphandle kokunyamezela lwakho ukunyamezela.
Ngoko, u-stanozolol uphucula njani amandla akho? Makhe ndicacise. Isilwayo senza umlinganiselo wokuveliswa kweeseli ezibomvu zegazi emzimbeni wakho. Ekubeni la maseli anembopheleleko yokuthwala i-oksijeni, izihlunu zifumana i-oksijini eyaneleyo yokunyamezela ukusetyenziswa kade kwaye kunzima.
Ngombulelo kwi-cortisol-blocking capabilities, winstrol iya kuphucula inkqubo yokubuyisela kwaye ikhusele uxinzelelo okanye uxinzelelo. Kungenxa yesi sizathu sokuba abasebenzisi abathatha inxaxheba kwimidlalo ekhuphisanayo njengebhayisikili okanye imidlalo yokugijima, ibhanki kwi-steroids yokukhuthaza ukusebenza kwabo.
Winstrol inzuzo 4: Umqhubi wokuThuthukisa
Ugqirha unokumisela i-winstrol kwizigulane ezifumanisa nzima ukufumana okanye ukugcina ubunzima obuqhelekileyo. Nangona kunjalo, oku akuyona into ecacileyo endifuna ukuyifaka.
Abesifazana beye bacebiswa ukuba bahlambulule i-anabolic steroids ngenxa yemiphumela yecala ye-androgenic. Ngakolunye uhlangothi, nantsi ezinye iindaba ezilungileyo kunye nokulinganisela ngokwesini kwi-bodybuilding industry. Winstrol kubafazi Unesiqiniseko sokuphucula izihlunu zakho ezintle ngaphandle kokuxubusha ngokunyuka kweenwele zomzimba, izitho zomzimba ezithandekayo, okanye izibilini ezinzulu.
Winstrol inzuzo 5: Umngcipheko ophantsi weeAndrogenic Side Effects
UWinstrol uphakathi kwezinto ezimbalwa ze-anabolic steroids ezinomlinganiselo ophantsi we-androgenic. Ngoko ke abasebenzisi abesilisa nabesifazana abanako ukufumana ukulahleka okungapheliyo kweenwele okanye i-acne.
Nangona kunjalo, akuthethi ukuba ukhuselekile ngokupheleleyo kule miphumo yecala le-winstrol. Ndivumele ukuba ndikhanyise apha. Abanye abantu bafuzisela i-androgenic upshots kunye nefuthe elincinane. Ukuba awuwa phantsi kwesi sigaba, ke iziza ziza kukuvulela kakuhle.
Winstrol inzuzo 6: Ubonakala obuhle (Ukucheka Umjikelo)
Phantse zonke ii-anabolic steroids ziza kuzisa umphumo wokubhukuda kwindlela amaqela ezihlunu axutywa ngayo. Ukuba unomzimba womzimba okanye umqhubi wokhuphiswano, ukubonakala okubanzi kunokuphazamisa ukusebenza kwakho ukhuphiswano.
Into efanelekileyo malunga ne-winstrol yinto enceda umsebenzisi ukuba agcine imisipha ephilileyo kuphela. Kungenxa yesi sizathu sokuba isilwanyana sisetyenziswe kwisigaba sokusika ukunciphisa amafutha omzimba ngexesha lomjikelezo. I-winstrol yeClub kunye nePramobolan kwaye uya kuba nobukeka obunzima ngokubonakala kwe-vascular.
Winstrol inzuzo 7: Akukho Ukugcinwa kwamanzi
I-androgenic i-hormone ekhoyo kwi-anabolic steroids yimbangela ebalulekileyo yokugcinwa kwe-sodium, ngoko ke, ukuthambekela komzimba ukugcina amanzi. Ingakumbi i-estrogenic yilezi zi yobisi, ngaphezulu kwamanzi umzimba wakho uya kugcina. Ngaphandle koko, le mpahla yecala iboshwe ekuqhubeni nokunyuka kwegazi.
Kuze kube ngoku, kukho ezintathu i-steroids eziphathekayo zezakhiwo. Ezi zi-stanozolol, anavar, ne-trenbolone. Ukuba unokuthelekisa iinzuzo ze Winstrol vs anavar, uya kubona ukuba zombini unemiphumo ekhethekileyo yokwakha umzimba. Nangona kunjalo, uWinny uya kukunceda ufumane izihlunu ezingaphezu kwezinye ezintathu ze-steroids.
Winstrol inzuzo 8: Ukusetyenziswa kwezonyango
Ubunzima obusemva kweWinstrol luphuhlise i-steroid ngenjongo yokongika izimo zokuchitha imisipha. Ukusetyenziswa okuphambili kwe-stanozolol kukunyango lwe-angioedema, equka ukuvuvukala kobuso, umqala, okanye izitho zangasese.
Ezinye iimeko eziza kukubeka phantsi kwe-presstrol ye-winstrol ziquka izilonda ze-decubitus, i-anemia ye-anemia, i-osteoporosis, iyancipha umsebenzi we-fibrinolytic, okanye ukungaphumeleli kokukhula. Ngaphandle koko, i-steroid iyona ndlela isisombululo esiphezulu seengxaki ezithile, ezinokulawulwa kuphela ngokuguqula iinkqubo zobomi.
Ngaba ndikhankanye ukuba i-winstrol ephindwe kabini njenge-steroid yabantu kunye nesilwanyana? Ngoku uyazi! Nangona zikhuthaza ukusetyenziswa kwezilwanyana ezithatha inxaxheba kwimincintiswano efana nokugijima kwehashe, uWinny naye uyigciwane le-vet. Ikhuthaza ukukhula kwamathole kwaye ilawula ukukhathazeka okuninzi kwintlanzi kunye neenja.
Winstrol inzuzo 9: Epheleleyo kwiSteroid Stacking
Nangona kukho iintlobo ezahlukeneyo anabolic steroids, awukwazi ukuwafaka njenge-candy. Ukuchithwa okufanelekileyo kwe-steroid kuqinisekisa iziphumo ezilungileyo. Nangona kunjalo, ilahleko ifika xa kufuneka uqaphele ukuba zeziphi izibonelelo ezidibeneyo kunye nomnye, kwaye ungathini ukuxuba kunye nokuzifanisa.
Ndivumele ukuba ndicacise ukuba kutheni kufuneka ubeke iWeststro kunye nezinye iziyobisi.
Uninzi lwe-anabolic steroids luya kubopha kwi-Sex Hormone-Binding Globulin yomzimba. Ukubambisana okuphezulu kwe-SHBG kungathathi nxaxheba isenzo se-steroid kumzimba womsebenzisi, oko ke, ukwenza isilwanyana singenanto.
Icala lihluke kwi-winstrol ekubeni lihlisa amanqanaba e-SHBG emzimbeni. Ngako oko, unako ukuyibeka kunye ne-steroids emininzi kwaye usenokufumana imisipha enesifo kunye nesimo esihle se-vascular. Intsebenziswano yethu efanelekileyo yeWinstrol iquka i-trenbolone, ikararine, i-Primobolan, i-andarine, i-anavar, okanye i-masteron.
I-Testosterone inokulungele ukufakwa kwempahla kodwa qiniseka ukuba uthathe amanani angaphantsi ukuba ungaqhelwanga nemiphumo yokunciphisa.
Winstrol inzuzo 10: KuBahla
Ukufumaneka kwe-steroid kuya kuhlala kuqikelele amandla ayo. Ku-stanozolol, kukho iqela le-methyl kwisakhiwo salo elenza ukuba lufumaneke kwiiyure ze-24. Esi sidakamizwa esikhulisa isisu singadlula esibindi ngaphandle kokuphula.
Winstrol inzuzo 11: Iindlela ezininzi zoLawulo
Unako ukuthatha i-winstrol ngomlomo okanye ngeenjini zangamayeza. Ixesha langaphambili lilawulwa kabini ngosuku ukusuka kwisiqingatha-sobomi malunga neeyure ezisi-9. Ngakolunye uhlangothi, lo mva unesiqingatha sobomi, ngoko, uthathwa kanye ngosuku.
Ukuba sasihamba ngeengxelo zabathengi, abaninzi abasebenzisi bakholelwa ukuba ifomu elingenayo ivelisa iziphumo ezilungileyo. Nangona kunjalo, into enye eya kubabenzela ukukhaba ingxabano, eqhubekayo nangemva kokulawula.
Ingaba ufuna ukugqithisa isiphumo somlhamo wesibindi? Emva koko ufanele ujoye kunokuba ugqibe i pilisi. Nge-injection, i-winstrol iya kufaka indlela yokuhambisa ngokuthe ngqo ngaphandle kokuhamba kwesibindi.
Winstrol inzuzo 12: Zimbalwa Zempembelelo
Njengawo nawaphi na amanye amayeza, i-winstrol ineempembelelo nazo. Nangona kunjalo, xa unamathela kwi-Winstrol i-dose ephakanyisiweyo ngelixa ugcina umjikelo wexesha elifutshane, uya kuba neempembelelo ezingekho nakwicala.
Izidumbu ezigulisa kakhulu abantu abazondayo yizo ezibangelwa i-androgenic ne-estrogenic hormone. Kule meko, i-winstrol inexabiso elincinci kunye ne-androgenic kwaye ayikwazi ukuguqula i-estrogen. Ngoko, ukhuselekile!
Winstrol inzuzo 13: Othandekayo kwabasetyhini
Uninzi lwe-anabolic steroids luphikisana nabasetyhini ngenxa yendlela ephezulu ye-androgenic. Amanqanaba aphezulu e-androgen aya kubangela ukulahlekelwa yintlungu kumadoda, ukuphakama kwezwi kubasetyhini, kunye nezinye iziphumo ezibi ezimangalisa ongayi kuziqhayisa ngazo.
Icala lihluke kunye ne-stanozolol kuba liphakathi kwe-steroids embalwa enexabiso le-androgenic liphantsi. Ukuthelekisa okukhawulezayo phakathi kweerrogen kunye ne-anabolic ratios yeli gciwane kunye ne testosterone kuya kufanana ne-10.7: 1 kunye ne-1: 1, ngokulandelanayo. Ngala maxabiso, ngoku uyaqonda ukuba kutheni unako ukuqhuba ibhanki kwi-winstrol kubafazi ngaphandle kokuphuma njengoJay Cutler.
Winstrol inzuzo 14: Animal Steroid
Kwizilwanyana zezilwanyana, i-stanozolol (iWinstrol / winny) iqhayisa izilwanyana ezininzi kunye nokwenza i-anabolic steroid. Ekuqaleni, ifom ye-injection yayenzelwe kuphela izilwanyana. Abanye abantu baya kusebenzisa iziyobisi xa beqhekeza ukugijima kwehashe okanye nayiphi na into efanelekileyo yokuncintisana kwezilwanyana.
Winstrol inzuzo 15: Ukukhawuleza kunye nobuchule
Mhlawumbi ubuza ukuba kutheni umgijimi oyintlekeleyo eya ku-steroid, eya kuthi yakha kuphela izihlunu kwaye ishiye umphumo wokubhukuda. Ewe, i-winstrol ayiyi kukwandisa nje ukunyamezela kwakho kodwa inokunceda ekuphuculeni ubuchule bakho kunye nesantya ngokubanzi. Emva koko, abagijimi bayakukhathalela malunga nokusebenza kwabo kunokuba bafana.
Ukuba siza kuxoxa ngazo zonke inzuzo ye winstrol, Ndicinga ukuba siya kufuna yonke incwadi. Ezinye izinto ezintle zibandakanya ukukhuthaza ukuxinwa kwethambo, ukuqiniswa kweetoni kunye nemigqa, kunye nokuvelisa ubunzima obubonakalayo kodwa bunzima.
4. Isisindo seWinstrol
I-Winstrol ikunika ukuchaneka kokukhetha phakathi komlomo okanye injectable dosage. Bobabini babonisa i-stanozolol njenge-hormone esebenzayo eneC17-aa steroids. Ixesha elifanelekileyo lokulawula isiza phambi okanye ngexesha lokutya.
Ngokomlomo, i-stanozolol ifumaneka kwifomathi yepilisi okanye ipilisi. Ekubeni i-winstrol yesigamu sokuphila ifikelela kwiiyure ezisi-9, kuya kufuneka uwathabathe kabini ngosuku ukuze ugcine ukufumaneka kwayo.
Umthamo womlomo uhluka phakathi kwe-40 kunye ne-80mg. I-Winstrol yeyona ndlela ifakwe phantsi kwezinto ezinje ezifana namava akho kunye ne-steroids, izinga lokunyamezela, kunye nento ofuna ukuyifumana. Qaphela ukuba, ukumangaliswa kwesibindi sakho kunye nomthamo ophezulu kunokukuphazamisa nje ngemiphumo engathintekiyo.
Kwiimeko ezininzi, i-Winstrol yokuthengisa itholakala kwiphakethe yeipilisi ze-10mg okanye ze-50mg. Abasebenzisi besilisa banokuya kwiqondo eliphezulu kodwa abafazi kufuneka babe sezantsi.
Abasetyhini abaza kwenzeka ukuthenga i-dosage ephezulu, akufanele baphumele ngaphandle kuba banokuhlula iipilisi kwisahluko sekota kunye nokutya kwi-12.5mg / imini. Ngapha koko, amadoda ukuthenga iWinstrol Iipilisi ze-10mg zisakhuselekile ukusebenzisa ii-capsules ezinhlanu ngosuku.
Kulo lonke u-Winny lungafumaneka kwifom yefribhethi, iimveliso ezimbalwa zivelisa iziyobisi kummandla onzima. Umkhuhlane unamandla kwaye unomdla oqinileyo. Nangona kunjalo, unako ukuthobela i-flavour ngokuthatha ijusi okanye isiselo esinokukhetha.
Ukuba ukhetha ukuthatha iigciwane, enye i-winstrol yomzimba wonyango izokuhlala kwiiyure ezilandelayo ze-24. Umlinganiselo owela phakathi kwe-50 kunye ne-100mg kuxhomekeke ekubeni unomzimba womzimba, umsebenzisi ophakathi, okanye umqali wokuqala.
Unokuzifaka kwi-butt, ingalo engaphezulu, okanye ngamathanga.
5. Winstrol Half-ubomi
Ubomi besiqingatha se-Winstrol bunamathela kwihlobo lokuthatha umyinge. Ngokomzekelo, umthamo womlomo unokufumaneka kweeyure ze-8-9. I-injection, ixesha lide nje ngeeyure ze-24.
6. Isikhathi sokuThola iWinstrol
Ukuba uvavanyo lokulwa ne-doping luyenziwa, ixesha lokufumana iiveki ezintathu kunye nesibhozo, ngokulandelanayo. Ezi manani zibonisa ukuba i-winstrol ayiyi kuba luncedo kubadlali abasebenzayo ekubeni imichiza yezilwanyana iphela iiveki ze-2 - 4 emva kokugqiba umjikelo.
Umjikelezo oqhelekileyo we-winstrol ungapheli ngaphezu kweeveki ezintandathu. Nangona kunjalo, abantu abanamava okusebenzisa i-steroids banokuyithatha ixesha elide kwiiveki ezisibhozo. Kucacile ukuba uyanciphisa umyinge iiveki ezimbini ngaphambi kokuphela kwesigaba. Nangona isilwanyana sishiya igumbi le-steroid stacking, akufanele uyisebenzise kunye neC17-aa steroids.
Nangona abesifazana bamele bagcine i-dose yemihla ngemihla ye-10mg / ngosuku, abaqulunqwa ngamalungu omzimba kufuneka bathathe umyinge we-50mg / imini. Nangona kunjalo, abasebenzisi abasebenzayo bangenza i-100mg ngosuku kuphela kwiiveki ezimbini zokugqibela zomjikelezo.
Ekupheleni komjikelezo we-winstrol, kufuneka ufumane unyango oluthile lokunciphisa uxinzelelo kunye nokunciphisa i-hormone. Kungakhathaliseki ukuba ukhaba uqale iqela le-testosterone eliqhelekileyo okanye uphelise ukulahlekelwa izihlunu ozifumene kwiiveki ezintandathu. Amanqanaba aphantsi we testosterone aya kukudandatheka kwaye uzive ubuthathaka.
9. Kuthatha ixesha elingakanani ukujonga iWinstrol?
I-Stanozolol iqala ukusebenza ngokukhawuleza ungena kumjikelezo omtsha. Nangona kunjalo, utshintsho olubonakalayo lwenzeka ngeveki yesibini. Ngeentsuku ze-14, qiniseka ukuhamba kude kwisibuko ngokumomotheka ekubeni winstrol ngaphambi nangemva imifanekiso iza kukugxotha.
Khumbula ukuba olu phucula umxhasi aluqinisekisi iziphumo ezilungileyo kubo bonke abasebenzisi. Ngenxa yokuziqhayisa, i-muscular, ne-stredded physique, kuya kufuneka usebenze ngokutya kwakho, ukutya okunomsoco, kunye nokusetyenziswa kolawulo.
Nantsi ukuphazamiseka kwizinto zokulindela ngaphakathi kwimijikelezo yeeveki ze-6 - 8;
1 Akukho tshintsho ebonakalayo kodwa umzimba uya kulahleka ubuninzi bamanzi obuninzi
2 Ukulahlekelwa kweoli ephawulekayo kunye namandla anokuphucula
4 Ukwanda kwamathambo kunye namandla amakhulu
6 Ukubonakala kakuhle kwemisipha kunye nomzimba omncinci kunye nokusebenza okuphuculweyo
Khangela ezinye iingcebiso zokuthabatha indlela yokonwabela iziphumo zokwakha umzimba;
Yiba njalo kwaye uhlale usebenza kwi-natural muscle gain
Dlulisa phezulu i-McDonalds burgers kunye nezo zithandekayo, izweyizi, okanye ukutya okunamafutha
Hlala kude notywala ngaphandle kokuba uzimisele ukuzibulala ngenxa yokuzibulala ngokusisigxina isibindi sakho
Yimangalisa isibindi sakho ngamaninzi amaninzi onke amaxesha
Thatha ukutya okucebileyo kwi-vitamin C efana nezithelo zelitrus
Faka i-cardio yokuzivocavoca kwirejista yakho yokuqhuba umsebenzi
Gweba ubuhlobo kunye nemifuno eluhlaza
10. Iimpembelelo eziqhelekileyo zeWinstrol
Imiphumo yokusebenzisa i-Winstrol iyahluka ukusuka kumntu omnye kuya kwesinye ngenxa yemibono ye-hormone. Ukufumana iimpembelelo ze-anabolic steroids kuqiniseke ngokufa, kodwa unokunciphisa ingozi ngokungadluli umyinge kwaye uhamba umjikelezo omfutshane.
Ukunciphisa iTestosterone ngokukodwa ngexesha lokujikeleza kwithuba
Ukwanda kwinqanaba le-cholesterol elibi, ngoko ke, ukugxeka ingozi yokubetha okanye ukuhlaselwa kwentliziyo
Intlungu ehlangeneyo ngenxa yobume obangelwa ngamanqanaba aphantsi e-synovial fluid
Ukuxinezeleka emva komjikelo
Iziphumo ezimfutshane, ezihlala malunga neveki ezine
Ukuguqulwa kwamanzi phakathi kwabasebenzisi besetyhini
Ukuvuthwa kwepiphyseal kwangaphambili
11. Indlela yokuphepha i-Winstrol Side Effects
Sebenzisa ukongezwa kwe-cholesterol
Nangona intliziyo yakho iphilile, qiniseka ukuba wenze ukutshekisha rhoqo. Elinye inyathelo ebalulekileyo kukubandakanya iiminerali kunye ne-cholesterol ene-HDL enokutya kwakho. Ngokomzekelo, ioli yeentlanzi iphakathi kwezibonelelo ezifikeleleke kakhulu zokulawula le mpu melelo ye-winstrol.
Ukukhulisa amanqanaba akho e-testosterone
Amanqanaba aphantsi ka-testosterone ayenzeka ngexesha lokujikeleza kwexesha emva kokuveliswa kwemvelo kwe-hormone. Indlela eqinisekileyo yokujongana nale mphumela ecaleni yile nxalenye yokufaka inkxaso ye testosterone kwiiveki ezimbini zokugqibela zomjikelezo.
Izibonelelo ezinjenge-TUDCA, i-Liv-52, i-NAC, okanye i-milk spit iya kukhusela isibindi sakho.
Inkqubo ye-post cycle (PCT)
Ngokuqhelekileyo, i-androgenic steroids kunye nayo yonke i-hormone yokufakelwa iza kuthatha iiveki ze-2-3 ukuze zicime kwi-system yakho. Ngeli xesha, kufuneka usebenzise unyango lweziyobisi ukucima kunye nokuzinzisa izinga lakho le-hormonal. Umzekelo, ukusebenzisa i-Nolvadex okanye i-clomid iya kubuyisela umveliso we testosterone.
Ubude be-PCT buhluka phakathi kweeveki ezimbini ukuya kwezine.
12. Inkcazo yeWinstrol
Uphando lubonisa ukuba i-steroids ingakhokelela kumntwana wesisu
Amaxhoba e-prostate kunye neengxube ze-carcinomas
Abantu abane-hypersensitive to steroids
Abantwana kunye nentsha
13. Kwenziwa kanjani Thenga iWinstrol Online
Uninzi lwamazwe aluvimbele ukusetyenziswa kwe-anabolic steroids. Ngoko ke, kunzima ukufumana i-winstrol ngokuthengiswa ngaphandle kokuba uhambe kwamanye amazwe asemthethweni. Ngokomzekelo, e-US, e-Australia, e-UK, naseKhanada, kukuchasene nomthetho ukuba ube ngowakho, usebenzise, ​​okanye usasaze nayiphi na i-steroid. Nangona kunjalo, isicatshulwa sivumelekile kuphela ngesigunyaziso esisemthethweni esivela kugqirha.
Ngenxa yezithintelo ezithwalayo, i-winstrol inokufumaneka kuphela iimarike ezimnyama. Ngaphandle kweemarike ezithengiweyo, unokufumana oko ukhangayo kodwa kukho amathuba amancinane okufumana iimveliso zangaphambili.
Thatha, umzekelo, ifom ye-injject yakwaWinny isesimweni esinamandla. Ngaphandle kokuba iveliswe kwindawo ecocekileyo neyinyumba, isisombululo sinokuba neentsholongwane kunye nezifo. Ngenxa yesi sizathu, kufuneka wenze isinyathelo sokufumana ityiti esemthethweni.
Ngaphandle koko, ukukhangela kwiivenkile ezithile ze-intanethi kunokuba yingcamango ebalulekileyo.
Thenga iWinstrol Online
Ukuphela kwendlela efanelekileyo yokuthenga i-stanozolol yezinga eliphezulu loluntu ngokuthenga i-intanethi. Unokuba uye waya ukuthenga izilwanyana kwezinye iindawo ezikhathalela ngaphantsi malunga nokuthintela i-steroid, kodwa oku kubonakala kunzima. EMexico, umzekelo, imithetho elawula ukusetyenziswa kwe-anabolic steroids iyanceda abantu bayo.
190 Ubungqina bokuTywala kotywala 31.2ml -
Mamanzi amisiwe - 62.5ml
Utywala obunxilisayo - 3ml (3%)
McMullin, GM., Smith, C., Watkin, GT., Scurr, JH. Ukusebenza koPhuculo lwe-Fibrinolytic kunye neStanzolol kwiNyango yokuNqongophala kwamaVangeli, I-Australian ne-New Zealand Journal of Surgery, UEpreli 1991.
UKicman, AT, Pharmacology ye-Anabolic Steroids, IBritish Journal ye-Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018
Falanga, V., Greenberg, AS, Zhou, L., et al., Ukukhuthazwa kwe-Collagen Synthesis yi-Anabolic Steroid Stanozolol, Iimviwo zeNCBI, I-intanethi, uDisemba 1998
Bates, i-PC, i-Millward, i-DJ, i-Chew, i-LF, iimpembelelo ze-Anabolic Steroid Stanazolol kwi-Growth kunye neProtein Metabolism kwi-Rat, Ushicilelo lwePublication, Online, Septemba 1987
Uhlolo lwe-Oxymetholone: ​​I-Ultimate Guide ye-Oxymetholone (i-Anadrol)	I-Raw Proviron (iMesterolone) ekwakheni umzimba, umyinge, kunye nomjikelezo